Petersburg, njengoba inhloko-dolobha yaseRussia kwamasiko, izivakashi eziningi nezivakashi ezivela emhlabeni wonke. Mhlawumbe kwakuzothutheleka ezinjalo abathengi ezingaba kwavusa ukuvela eziningi izingubo nesicathulo ezitolo ezinikeza iqoqo imikhiqizo ezihlangabezana nezidingo ahlukahlukene yentengo, izinga, umbala, imiqondo, nokunye. N. An ububanzi umxhwele inkimbinkimbi inqubo Ukukhetha. Ngenxa yalesi sizathu, kulesi sihloko sizobheka izicathulo ezitolo Petersburg, ozokusiza baqonde ezihlukahlukene.
Abathengi kunabo bonke, futhi, ufuna ukubukeka emuhle futhi stylish. Basize kule ezitolo ezikhethekile ne izingubo zezingane kanye nezicathulo. Inethiwekhi ethandwa kakhulu okwamanje kuyinto inkampani "Antelope", okuyinto uthengisa imikhiqizo yayo endaweni yedolobha. Akhiwe TC ezinkulu ( "Oka", "Isikhala", "ipulatifomu", "International", "Capitol," kanye nabanye), lena sekuyindlela esikahle kakhulu ukuvakashelwa umndeni. Njengoba lebanga, kukhona onobuhle for abafana namantombazane ukuba nezidingo abazali bathole induduzo nekhwalithi nezimfuneko izingane ukubukeka. Kufanele futhi usho emaqaqasini esitolo. Abaklami wadala indawo evumayo lapho ingane izizwa ekhululekile futhi ukhululekile, okuyinto lula inqubo wokukhetha, kufaneleka futhi kuthengwe.
izicathulo Okunye izingane owaziwa sitolo Petersburg bangabanye inethiwekhi "Kotofey". Isici esiyinhloko inkampani ukulwela ukuqaliswa isihlangu okukhuthaza kumiswa efanele onyawo wengane bese kunciphisa ingozi yokuba flatfoot. Isitolo ngobukhulu "Kotofey" sise: Suvorov Avenue, indlu 61.
izinga German ngesikhathi intengo imali
izicathulo izitolo German Petersburg zingatholakala kuyo yonkhe indzawo, ngoba ukuba nobudlelwane nabathile izinga German kuthinta amakhasimende, Ifana nozibuthe. Kodwa yiziphi empeleni nokuqalisa umkhiqizo ezifanele?
Kusukela ngo-2007, idolobha usebenza inethiwekhi "nezicathulo German", okuyinto ibambisane brand owaziwa European. Le nkampani iye bakwazile ukuhlanganisa izinga okusezingeni eliphezulu, ubuhle kanye nobuchwepheshe. Phakathi izici ungakwazi ukuhlonza isinyathelo engavamile futhi Uhlelo evumayo isaphulelo. "I izicathulo German" Petersburg emelelwa 10 izitolo ezingxenyeni ezihlukahlukene zedolobha. Izibuyekezo ze-network ukukhiqizwa omuhle: amakhasimende ukugubha anhlobonhlobo eliphezulu onobuhle, kanye endaweni ekahle womhlaba.
Zonke endaweni eyodwa
Ngokuvamile, izitolo izingubo nezicathulo e St Petersburg amelela linye. Leli qhinga yakhelwe by abakhangisi, ngokuvumelana umthengi wakhe, oweza into eyodwa, cishe bayothenga, okwesibili, uma owawuzovumelana kuye. Ngenxa yalesi sizathu, izicathulo, esethulwa eMihlanganweni Yesigodi amaphuzu anjalo, kubukeka elula futhi enza izinto ezihlukahlukene, ngaphezu kwalokho, sekukuhambela kahle zonke izinto kusukela iqoqo.
Isibalo sazo ezitolo zihlanganisa imidondoshiya ngamazwe-H & M, NewYorker nabanye. Ngokusekelwe izinga isilinganiso imikhiqizo kanye amanani ezingabizi, bona ukuheha abantu abasha ukuba isibalo amakhasimende, okuvame ilungisa ikhabethe lakhe, futhi uthanda ukulondoloza izinga okusezingeni eliphezulu. Lokhu kusebenza futhi nezicathulo. Leyo mikhumbi okwethulwa kwalezi zitolo ukuhlangabezana zonke izitayela fashion, kodwa kuphela anele isizini eyodwa. Kepha akusimina kodwa okwesabisa abathengi; abazange alindele esengeziwe le ntengo.
Of inethiwekhi empilweni yangempela
umqondo abathandwayo selisetshenziswa abantu abaningi abakhuluma izicathulo ezitolo Petersburg - ikhathalogi ezisingethwe ku-website yabo esemthethweni, iyindawo lapho ungathola yebhangqa umklamo kwesokudla kanye nosayizi. Banikezwe ukuthandwa bethenga online, le ndlela sokuthenga akunakugwenywa.
Ngokuvamile wathenga izimpahla ezivela China (ngokushesha bakhangwa amanani aphansi futhi anhlobonhlobo) ne-USA (lapho itholakala khona imodeli ezingavamile kakhulu futhi ekhethelo). Esimweni sokuqala iphupho akudingekile; ekuphishekeleni imali, abaningi ukhohlwe mayelana nezidingo esiyinhloko izicathulo. Nokho, nangaphansi kwezimo ezinjalo, amakhasimende ungakhetha esingconywana, futhi ukubhala ngakho e ukubuyekeza komkhiqizo azosiza umuntu olandelayo okukhethiwe. ukuthenga izothunyelwa kuze Ukukhishwa into, okuyinto ehhovisi lenkampane. By endleleni, lo kwezidingo, udinga imodeli kusuka kwelinye idolobha noma izwe abaningi izicathulo ezitolo Petersburg.
nabathengisi Phezulu nezicathulo
Amaqhinga "ezishibhile futhi bejabule" lisetshenziswa hhayi kuphela izitolo ezinkulu izingubo nezicathulo. Sekuyisikhathi eside Akwaziwa Kari amanethiwekhi kanye Centro waqaphela ukuthi uma yakhe ibe iyona nto esemqoka - ukufeza inhlanganisela ephelele intengo nekhwalithi; ke eyabasiza ukuthandwa omkhulu phakathi amakhasimende.
Ngokuvamile e idatha izitolo Petersburg ukunikela izinga izicathulo ngoba ehlobo - flip-flops, izimbadada, njll agcinwa kahle kuze kube sekupheleni kwesizini, ukhululekile ayimigundatshani ubuhle ... Ngaphezu kwalokho, ngenxa intengo zabo ongaphakeme akuyona into edabukisayo sokuntshinga uma umonakalo futhi salandelwa imodeli ezihambelana nokucinga kwakho.
Sikhethe izicathulo ngoba ekwindla-entwasahlobo nzima - sezulu ezimanzi noma frost esindayo kungathikameza kabi, ngakho abathengi abaningi belulekwa ukubheka phakathi uhla amamodeli we okuqotho ematheni obukhulu.
Naphezu kwalezi zimo ezinhle umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, izibuyekezo ikakhulukazi omuhle. Kari futhi Centro - izicathulo izitolo Petersburg, ikheli lapho nihlakazeka phakathi edolobheni.
Izicathulo njengoba art
Abathandi izinto engavamile ukulingana izitolo, okuyinto zifana yezobuciko. iphuzu Lokhu okuthiwa kombhali ukuthi liqalise imodeli, master ezenziwe ngesandla. Kungcono kakhulu uma isichathule ukuya Loft Project "Phansi" at: Prospect Ligovsky, 74. Lapho, okuthi lapho inkosi izindawo esikhiphekayo ukunikela amaklayenti okunezinhlobonhlobo elincane onobuhle yokuqala, okuzokwenza kusimangaze futhi sithokozise abalandeli isiqondiso esinjalo.
Inzuzo enkulu ezitolo yangasese yikhono oda ngokuvumelana imidwebo ngabanye kanye nezicathulo ubunjalo wathenga. Nokho, i-pair of ezifanayo lapho ngeke uthole, kuzodingeka ukuthi akhokhele imali esezingeni elifanele. Buyafaneleka njengoba ngezandla futhi izinga izinto ziyabiza njengamanje. Izibuyekezo ezitolo anjalo kuwebhu kukhona esihle kakhulu: phela umphumela uhlale umthengi wanelisa, kusukela lihlangabezana yonke imibono.
Okokuqala incike lemali onayo. Inketho okahle ukuthenga izinga nezicathulo German esakhiwe ngezinto zemvelo esitolo inkampani; Kungaba abiza isizumbulu, kodwa lokhu imodeli ngeke ngokuhamba isizini ezokwenza imali yakho onyakeni olandelayo.
Shoe Izitolo Petersburg anikele ongakhetha eshibhile quality, kodwa izinto ezenziwe umuntu. Ngoba lezizinto ikakhulu ukusebenza ngo inethiwekhi izikhungo izicathulo.
Imikhiqizo "Simplisiti": sombuso ngoba eyakhula ujabule